Shooting lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
tampoka tondraka ny toe-po mba hitifitra? Sokafy maimaim-poana amin'ny aterineto shooter lalao. Ato amin'ity fizarana ity ny tena fitaovam-piadiana hafa no miandry ny mahery fo lehilahy sy mahery fo. Basy, basy marovava, grenady mpandefa, tsipìka sy crossbows, basy sy ny fiara mifono vy, BASY sy ny basy marovava, ary koa ny fitaovam-piadiana miaramila mahafinaritra efa voampanga sy vonona ny asa. Tsy vitan'ny hoe ny ankizilahy tia hilalao ao amin'io karazana – Girls mampiseho azy tsy latsa-danja liana. Ho hitanao eto ny mahery fo ny Sariitatra, ny solontenan'ny ny Wild West, toerana vahiny, biby sy ny robot. Mampisava ny faritra avy ny fananiham-bohitra ny zombies, vampira sy ny fahavalo.
Andriamatoa Bullet Online
Blocky Gangster Ady
Snipe tonga lafatra
Slenderman maintsy maty: Industrial fako
Pilotan'ny Ady Lehibe Faharoa
Kianjan'ny Zombie Outbreak
Mpitifitra tsy voasakana
Lalao Shooting tamin'ny Category:
Farany Shooting lalao
Lalao Online Rehetra Shooting lalao
Rehefa nandeha ny fotoana ny Fiadanana eo Amin'ny Olona tsy ao intsony ny toerana ho an'ny ny feat. Mangidihidy izy ireo hihazona ho an'ny ny milina basy na basy. Na dia ao amin'ny toe-javatra toy izany dia misy lalana sy namboarina mafy indrindra ho pneumonic basy izay mitifitra amin'ny lasibatra. Ireo izay tia kokoa ny hetsika, nandefa faritra ampy fitaovana manokana ho an'ny lazerbola, Paintball, airsoft. Fa mihoatra noho fa misy shooter lalao izay ny hetsika atao fotsiny ao an-tranonao, ary tsy manana na aiza na aiza mba handeha.
mpitifitra – Tifitra dia amin'ny fomba hafa. Izy ireo isan-karazany izy ny olon-dehibe sy ny ankizy Gamers. Mitombina simulators manolotra fahafahana maro ny mpilalao ary rehefa mandroso ny alalan 'ny asa fitoriana, dia manjary misy amin'ny toe-javatra samy hafa, lafin-javatra sy ny upgrades. Ny voalohany fahatelo singiolary shooter misolo amin'ny maoderina, mamela anao hahita ny zava-mitranga amin'ny maso ambaratonga. Sary tonga ny boky, ary tsy maintsy nanaiky kokoa ny isan-karazany.
Fidio ny miaramila fitaovam-piadiana sy ny fikasany
Ny mpilalao ny tanora amin'ny fahafinaretana be voafidy lohahevitra isan-karazany, ny tena foto-kevitra izay mbola fitifirana. Ary afaka mitifitra avy saika na inona na inona;
ny fahavalo koa aseho amin'ny isan-karazany
miaramila ny olona. &Nbsp;
Ny fianarana misy toerana malalaka
Ny toerana dia afaka manompo toy ny sehatra ho an'ny fanodinkodinana sy ny kofehy manolotra malaza ady farany, ary tena mahafinaritra.
Space toerana malalaka
Star Wars mpankafy tanteraka dia tsy maintsy miezaka ny tenany ho toy ny mpitari-tafika ny sambon-danitra, izay tsisy fiafarany plies manga ny lanitra, hanjaka-dalana ho any lavitra planeta, anisan'izany ny fiarovana avy amin'ny asteroids sy ny fanaovana ady amin'ny extraterrestrial sivilizasiona. Ho Resinao ny tany rehetra sy ny mampitoetra azy filaharany avy, ary ny kely ho hita ny tsy fankatoavana toy ny fihantsiana sy voasazy mafy. Dia manana laboratoara siantifika, toeram-pitrandrahana, miaramila. Izany rehetra izany dia ho toy ny fiarovana ny hampitaovana ny miaramila miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny fanafihana ankehitriny fahavalony, hanorotoro ny fanapahan-kevitra haingana sy ny fanafihana.
Ny fifanakalozana ny afo azo misokatra eny an-dalambe ao an-tanàna, rehefa tsy fokony Mafia fitaomana nizara ny faritany, na ny tafiditra ny asa. Polisy nitifitra manenjika jiolahy taminy, ka dia hamaly azy ho setrin'izany.
Ny andian-jiolahy any New York City namely ny antics olon-tsotra ka hamela ny polisy avy amin'ny asa. Ny fialan-tsiny dia famantarana ho azy ireo hanokatra afo.
dia berserk robot
Lalao ady ihany koa ny manolotra mpitifitra milina izay avy ny fanaraha-maso ary ankehitriny dia mandrava ny zavatra rehetra manodidina azy noho ny nanaovany ny olona. Ireo zhelezyaki tsy mamindra fo, satria tanteraka Mila asehontsika amin'ny fihetseham-po. Miombon-kevitra amin'izy ireo tsy mety miasa, ary mety ihany hitifitra ny handrava ny alalan 'ny fiarovana anaty akorany sy haneho ny elektronika rafitra ny asa.
tafiditry ny fahavalo bibidia ala
Lohahevitra naniraka anay na dia any an'ala ala izay tena tia ny hiady miaramila Amerikana. Izy ireo ihany no hitifitra, fa ny tanjona dia tsy tena zava-dehibe.